ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် | စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈
ဖတ်လို ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) မြန်မာ ရိုမေးနီးယား ဟီလီဂေနွန် အင်္ဂလိပ်
တမန်တော်ပေါလုသည် ဟေဗြဲလူများထံရေးသော ၎င်း၏စာတွင် “လက်တင်ခြင်း” အကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ပေါလုသည် အကြီးအကဲများခန့်အပ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းနေခြင်းလော သို့မဟုတ် တခြားအရာကိုလော။—ဟေဗြဲ ၆:၂။
တစ်ယူသန်ဆန်စရာအကြောင်းမရှိပါ၊ သို့သော် ပေါလုသည် လက်တင်ပြီးဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများ ကူးပြောင်းပေးခြင်းကို ရည်ညွှန်းနေပုံရသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် လက်တင်ခြင်းကို သီအိုကရက်တစ်ခန့်အပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်၍ ပြောထားသည်။ မောရှေသည် ယောရှုအား မိမိအရိုက်အရာကိုဆက်ခံသူအဖြစ်ခန့်အပ်ချိန်တွင် “လက်တင်မင်္ဂလာ” ပြုခဲ့သည်။ (တရား. ၃၄:၉) ခရစ်ယာန်အသင်းတော်တွင် အရည်အချင်းပြည့်မီသော အမျိုးသားအချို့ကို လက်တင်၍ခန့်အပ်ခဲ့ကြသည်။ (တ. ၆:၆; ၁ တိ. ၄:၁၄) မည်သူ့အပေါ်၌မျှ လက်ကိုအလျင်တဆောမတင်ရန် ပေါလုအကြံပြုခဲ့သည်။—၁ တိ. ၅:၂၂။
သို့သော် ပေါလုသည် ဟေဗြဲခရစ်ယာန်များအား ယခုတွင် “အခြေခံအယူဝါဒများ” ကို ချန်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ရာ “ရင့်ကျက်သည့်အဖြစ်သို့ တက်လှမ်းနေကြ” ရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည် “သေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအကျင့်များကို နောင်တယူခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်ခြင်း၊ လက်တင်ခြင်း” များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ (ဟေဗြဲ ၆:၁၊ ၂၊ ကဘ) ခရစ်ယာန်များသည် အခြေခံအရာမှတက်လှမ်းသင့်သည်ဟုဆိုရာ၌ အကြီးအကဲများခန့်အပ်ခြင်းသည် အခြေခံအရာတစ်ခုမျှသာဖြစ်မည်လော။ မဟုတ်ပါ။ အသင်းတော်အကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းသည် ရင့်ကျက်သောညီအစ်ကိုများ တက်လှမ်းသင့်သည့်ပန်းတိုင်ဖြစ်ပြီး ယင်းနောက် တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ရာဖြစ်သည်။—၁ တိ. ၃:၁။
သို့သော် လက်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားအသုံးပြုပုံရှိခဲ့သည်။ ပထမရာစုတွင် ယေဟောဝါသည် ဇာတိဣသရေလလူမျိုးကို မိမိလူမျိုးအဖြစ်မှငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အစား ဘိသိက်ခံခရစ်ယာန်များ၏အသင်းတော်ကို ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။ (မ. ၂၁:၄၃; တ. ၁၅:၁၄; ဂလ. ၆:၁၆) ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောခြင်းကဲ့သို့သော အံ့ဖွယ်ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများသည် ထိုအပြောင်းအလဲ၏သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ခဲ့သည်။ (၁ ကော. ၁၂:၄-၁၁) ကော်နေလိနှင့် သူ၏အိမ်သားများ ယုံကြည်သူများဖြစ်လာကြသောအခါ ထိုလူသစ်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိကြောင်း “ဘာသာစကားများစွာ” ပြောခြင်းအားဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။—တ. ၁၀:၄၄-၄၆၊ ကဘ။
လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အံ့ဖွယ်ဆုကျေးဇူးများကို တစ်ဆင့်ကူးပြောင်းခဲ့သောအခါများရှိသည်။ ဖိလိပ္ပုသည် ရှမာရိ၌ သတင်းကောင်းဟောပြောချိန်တွင် လူများစွာနှစ်ခြင်းခံခဲ့ကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ထိုနေရာသို့ တမန်တော်ပေတရုနှင့်ယောဟန်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့ ဤသို့ဖတ်ရသည်– “ထိုသူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်သောအားဖြင့် သူတို့သည် [မကြာသေးမီက နှစ်ခြင်းခံခဲ့သူများ] သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြ၏။” မြင်သာနိုင်သောစွမ်းရည်များက သူတို့သည် ဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများရရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ရမည်။ အကြောင်းမှာ ယခင်က နတ်ဝိဇ္ဇာလိုက်စားခဲ့သောရှိမုန်သည် ဝိညာဉ်တော်၏ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး ယင်းလက်တင်နိုင်စွမ်းကို လိုဘကြီးစွာဝယ်ယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၊ သို့ဖြင့် သူသည် အခြားသူများ အံ့ဖွယ်အမှုများလုပ်နိုင်စေသည့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးရန် သူတို့အပေါ် လက်တင်နိုင်စွမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်။ (တ. ၈:၅-၂၀) နောက်ပိုင်းတွင် ဧဖက်မြို့တွင်လူ ၁၂ ဦးနှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဤသို့ဖတ်ရသည်– “ပေါလုသည်လည်း၊ သူတို့အပေါ်၌လက်ကိုတင်လျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဆင်းသက်တော်မူသဖြင့် ထိုသူတို့သည် အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားကိုပြော၍ ပရောဖက်ပြုကြ၏။”—တ. ၁၉:၁-၇; ၂ တိမောသေ ၁:၆ နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ထို့ကြောင့်၊ ဟေဗြဲ ၆:၂ ကယုံကြည်သူလူသစ်များထံ ဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများကူးပြောင်းရန် လက်တင်ခြင်းကို ပေါလုရည်ညွှန်းခဲ့ပုံရသည်။
w08 - 2008-09-15
သမ္မာကျမ်းစာခေတ်တွင် ယေဟောဝါသည် “ကယ်လွှတ်သောအရှင်” ဖြစ်တော်မူခဲ့
ယေဟောဝါသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို “ကယ်လွှတ်သောအရှင်” ဖြစ်တော်မူ၏
“စိတ်အားထက်သန်” မှုဖြင့် တိကျမှန်ကန်သောအသိပညာ၌ တိုးပွားပါ
အိမ်ထောင်မင်္ဂလာတွင် “သုံးလွန်းတင်သောကြိုး” ကိုထိန်းသိမ်းလော့
ယေရှုကို တုပပါ ဘုရားသခင်နှစ်သက်လက်ခံသော ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုကို ပေးဆက်ပါ
သက်သာလောနိတ်မြို့သားများနှင့် တိမောသေထံရေးသောစာများမှ ပေါ်လွင်ချက်များ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈
ကင်းမျှော်စင်—လေ့လာရန် စာစောင် စက်တင်ဘာ ၂၀၀၈